"Koa mitafia famindrampo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala." Kôl. 3:12.
Aoka ho ny lalàn' ny fiantrana no eo amin'ny molotrao, ary ny menaky ny fahasoavana no ao am-ponao. Izany no hanome vokatra maha­gaga. Ho malemy fanahy, ho be fangorahana sy be fiantrana ianao. Ilainao avokoa ireo fahasoavana ireo. Tsy maintsy raisina sy entina ho eo amin'ny toetranao ny Fanahy Masina mba ho toy ny afo masina handefa hanitra mamerovero izay hiakatra any amin'Andriamanitra-izay tsy avy amin'ny molotra manameloka - ary ho fanasitranana ny fanahin'ny olona (... ) Rehefa mibanjina ny toetran'i Kristy ianao, dia ho voaova ho tahaka ny endriny.
Jesôsy Tompo no hany mpana­votra antsika. Amin'ny alalan'ny fahasoavany no hahaizantsika mikolokolo ny fitiavana, manabe ny tenantsika hanao teny mora sy miantra. Amin'ny alalan'ny faha­soavany no hampiova ny fihetsika mivatravatra tsy voalanjalanja ataontsika. Ho eo amin'ny molotsika ny lalàn'ny fiantrana, ka izay ambany fiasan'ny hery miasa mangina sarobidy avy amin'ny Fanahy Masina, dia tsy hahatsapa fa porofon'ny faha¬lemena ny fiaraha-mitomany amin'izay mitomany sy ny fiaraha¬mifaly amin'izay mifaly. Mila mamboly toetra mendrika avy any an-danitra ao anatintsika isika. Mila ianarantsika ny dikan'ny hoe maneho fianatra amin'ny olona rehetra, dia faniriana marina ho tonga tara-pahazavana fa tsy aloka eo amin'ny fiainan'ny hafa.
Hararaoty ny fotoana mety rehetra hanaovana izay hampaha­sambatra ny olona manodidina anao, ka hizarànao aminy ny fitiavanao azy. Ny teny fiantrana, ny fijery mifono fangorahana, ny fihetsika maneho fitiavana atao amin'ireo miady irery amin'ny fiainana, dia toy ny rano manga­tsiaka iray kapoaka ho an'ny fanahy mangetaheta (...)
Iaino ny tara-masoandron' ny fitiavan'ny Mpamonjy, dia hanao soa amin'izao tontolo izao ny hery miasa mangina avy aminao. Aoka ny Fanahin'i Kristy no hibaiko anao. Aoka ho eo amin'ny molotrao mandrakariva ny lalàn'ny fian¬trana. Fifehezan-tena sy tsy fitiavan-tena no hita eo amin'ny fiteny sy ny fihetsika ataon'ireo izay nateraka indray, mba hiainany fiainam-baovao ao amin'i Kristy.